Beesha caalamka oo dhowaan Dubia kagga shiraya horumarinta Soomaaliya iyo Burcad-badeeda – Radio Daljir
Beesha caalamka oo dhowaan Dubia kagga shiraya horumarinta Soomaaliya iyo Burcad-badeeda
Seteembar 2, 2013 6:48 b 0
Dubia, September 2, 2013 – Dowladaha taageera qorshaha lagu bur burinayo weerarada Burcad- badeeda iyo ururo caalami ah ayaa dhowaan shir ku yeelan doona dalka isutaga Amerat-ka Carabta, waxaa shirkaas lagu qorsheeyey in looga hadlo howlaha Burcad-badeeda.
Shirka ayaa intiisa badan waxaa la soo sheegayaa in diirada lagu saarayo dib u dhiska dalka Soomaaliya oo la taageerayo iyo falalka Burcad badeeda oo laga hortagayo, waxaana goobta lagu soo bandhigi doonaa nidaam cusub oo ay Soomaaliya qeyb ka noqonayso.
Waxaa ka qeyb-galaya ku dhowaad 500 oo xubnood, kuwaas oo ka kala socda beesha caalamka, ururo caalami ah, dalalka ka shaqeeya xeebaha Soomaaliya, wasiiro arrimo debedeed iyo Ganacsato, shirka ayaa lagu gorfeynayaa sidii loo dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha ee Soomaaliya.
Dowlada Ingiriiska ayaa sheegtay in ay wax wanaagsan tahay hoos u dhaca ku yimi weeraradii Burcad badeeda ay geysan jireen, Simon Ancona oo ah sarkaal u hadlay Brtian ayaa sheegay sidaas, wuxuuna ku baaqay in shirkaan nuxur wanaagsan lagu diyaariyo.
Hay?adaha ka shaqeeya la socodka weerarada Burcad badeeda caalamiga ah ayaa sheegay in uu hoos u dhigmay, weeraradii ay geysan jireen kooxaha qowlaysatada ah, waxaana shirkaan xusid mudan in uu furmayo toddobaadka dambe.
Puntland oo sheegtay in aysan aqbali doonin natiijada shirka Qaran ee maanta Muqdisho ka furmay
Wasaarada arrimaha gudaha Federaalka oo shaacisay in uu furmi doono shirweyne Qaran (Dhegeyso)